पायः जात्रा (खड्ग जात्रा) – Jheegu
नेपाली भाषा फाेटाे फिचर लिपांगु संस्कृति
October 21, 2018 sharan dongol	0 Comments
ने सं ११३८ काैलाथ्व द्वादशी
शरण ज्यापू हरि
वडा दशैंको अन्तिम दिन अर्थात् टीका र त्यसको भोलिपल्ट उपत्यकाका विभिन्न स्थानहरुमा पायः जात्रा (खड्ग जात्रा) गर्ने गरिन्छ । दानवी एवं आसुरी शक्तिमाथि विजय प्राप्त गरेको उपलक्ष्यमा निकालिने खड्ग जात्रा भव्य रुपमा उपत्यकामा मनाइदै आइरहेको छ ।
किपा ः शरण ज्यापू हरि
तन्त्रमन्त्रबाट अभिषित खड्ग बोकी निस्कने पायः (खड्ग) जात्रा काठमाडौंको टेबहाल, महाबौद्ध, वटु, किलागल, यट्खा, कोहिटीमा ज्यापु समुदायबाट भव्यरुपमा सम्पन्न गरिन्छ । स्याक्वत्याक्व अर्थात नवमीको दिन आसुरी शक्तिमाथि विजय प्राप्त गरे पश्चात भोलिपल्ट अझैं कहीं कतै लुकेर बसेका छन् की भनी खोजी गर्न खड्ग जात्रा मनाइदै आएको भनिन्छ । हनुमानढोकाबाट लाय्कु पायः तलेजुबाट निस्कन्छ भने भिमसेनस्थान र कोहिटीको बिचको एउटा चोकमा अर्को पायः पनि निकालिने गरिन्छ जुन ताम्राकार समुदायबाट निकालिन्छ । एकादशीको दिन असनमा तुलाधर समुदायबाट अर्को पायः जात्रा चलाउदै आएको पाइन्छ । जसमा गुठीको कान्छो सदस्य थकाली बनाई जात्रा शुरु गरिन्छ ।
यस्तै सोही दिन काठमाडौंको दक्षिणमा रहेको नेवाः बस्ती टोखामा पनि पायः जात्रा अन्तर्गत द्यःखः जात्रा गरिन्छ ।
त्यस्तै मध्यपुर थिमिमा पनि पायः जात्रा अन्तर्गत भुईफासी पालेगु जात्रा मनाइन्छ । कीर्तिपुरमा पनि पायः जात्रा गरिन्छ । जुन पायः जात्रा एक बेग्लै किसिमको रहेको छ । त्यहाँ पायः जात्रा अन्तर्गत सिन्दुर जात्राको रुपमा मनाइन्छ । महिलाले सुकुन्दा बाली सिन्दुरको टीका लगाई दिई पायः जात्रा मनाउने गरिन्छ ।
त्यस्तै पाटन ललितपुरमा पनि भव्य रुपमा पायः जात्रा मनाईन्थ्यो । विविध कारणले बन्द प्रायः भैसकेको ललितपुरको पायः जात्राहरु मध्य यस वर्ष आगँछेँ पायः जात्रा शुरु गर्न यहाँका संस्कृतिकर्मीहरु सफल भएको छ भने यसको निरन्तरतास्वरुप आगामी वर्षहरुमा अन्य पायः जात्राहरु पनि निकालिने जानकारी प्राप्त भएको छ । ललितपुरमा मनाइने अन्य पायः जात्रामा लाय्कु पायः, तज्या पायः, इकुबहा पायः प्रमुख रहेको छ ।
त्यस्तै भक्तपुरको नवदुर्गा गण पनि भक्तपुर लाय्कुबाट निकालिने पायः जात्रा सँगै देश भ्रमण गर्ने गरेको पाइन्छ ।
त्यस्तै लुभु, थसिका साथै अन्य नेवाः वस्तीहरुमा पनि पायः जात्रा निकालिने गरिन्छ ।
← मचाम्ह न्यामिसा (बाखं)
नेपालभाषायात आइसियुलय् यंकेगु कि बजारय् ? →
बुंगद्यः म्हिग गाबहालं साला मंगलय् थ्यंकल, थौं लुँहितिइ थ्यंकाः याः न्यायेकी
April 21, 2018 sharan dongol 0
बाटो नभएको जग्गा किन्नेहरुले GLD को बाटो खोज्ने ?
June 17, 2018 razen manandhar 0